Abaabul weyn oo dagaal oo ka socdo dalka Itoobiya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Abaabul weyn oo dagaal oo ka socdo dalka Itoobiya
Abaabul weyn oo dagaal oo ka socdo dalka Itoobiya
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto TPLF, haddii ay jebiyeen xabad joojinteedii ay dowladdu ku dhawaaqday daba-yaaqadii bishii hore ee June.
“Waan iska difaaci doonnaa, iskana caabin doonnaa weeraradan ay nagu hayaan cadowgeena gudaha iyo dibaddaba, iyadoo laga shaqeynayo sidii loo dadajin lahaa gurmadka bani’aadanimo.” Ayuu yiri Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Tani ayaa carqaladayn karta howlaha gurmadka bani’aadamimo ee la doonayo in gargaarka lagu gaarsiiyo boqolaal kun oo qof, oo ku nool gobolka waqooyiga Itoobiya dhaca ee la sheegay inay qarka u saaran yihiin in macluul ugu dhintaan gobolkaasi.
Previous articleMacalin Cumar Maxamuud Xalane oo lagu aasay Beledweyne (SAWIRRO)
Next articleShariif Sheekh Axmed oo kulan la qaatay Wakiilka Norway ee Somaliya